Written by Khaing Zar Win Swe on 06 May 2017 . Posted in News My.
ပုဂံဓာတ်ပုံ ပွဲတော် အတွက် လမင်းသစ် စားသောက်ဆိုင် မှ ဓါတ်ပုံပြိုင်ပွဲ မှ ဆုရွေးချယ် ခံရသောသူများ ကို ထပ်ဆင့် ဆုချီးမြှင့် ပေးခြင်းဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းအတွက် ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါသည်။ ဆုရရှိသူမှလည်း အထူးကျေနပ်နှစ်သက်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်မိပါသည်။လမင်းသစ် စားသောက်ဆိုင် မှ ဆုရရှိသူ အားလုံး အတွက် ညစာ(မြန်မာ့ရိုးရာ ထမင်း)ကို ဆုချီးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။လမင်းသစ် စားသောက်ဆိုင်မှာ မြန်မာ့ရိုးရာ အတိုင်းချက်ပြူတ်သည့် အရသာကောင်းမွန်လှသော ထမင်း၊ဟင်း( မြန်မာ့ရိုးရာ အရသာ စစ်စစ်) များကြောင့် ကျော်ကြားပါ သည်။
Written by Khaing Zar Win Swe on 05 May 2017 . Posted in News My.
ပုဂံဓာတ်ပုံ ပွဲတော် အတွက်နန္ဒာ စားသောက်ဆိုင် မှ ဓါတ်ပုံပြိုင်ပွဲ မှ ဆုရွေးချယ် ခံရသောသူများ ကို ထပ်ဆင့် ဆုချီးမြှင့် ပေးခြင်းဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းအတွက် ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါသည်။ ဆုရရှိသူမှလည်း အထူးကျေနပ်နှစ်သက်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်မိပါသည်။နန္ဒာ စားသောက်ဆိုင် မှ ဆုရရှိသူ သုံးဦးအတွက် ညစာ နှင့် ရုပ်သေးအကပွဲပါဝင်သည့် စုံတွဲလက်မှတ်(နှစ်ယောက်စာ)ကို ဆုချီးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။နန္ဒာ စားသောက်ဆိုင်မှာ ရုပ်သေးပွဲနှင့် ဒေါင်းလန်းနှင့် တည်ခင်း သည့် အရသာကောင်းမွန်လှသော မြန်မာ့ရိုးရာ အစားအစာများကြောင့် ကျော်ကြားပါ သည်။
Written by Khaing Zar Win Swe on 04 May 2017 . Posted in News My.
ပုဂံဓာတ်ပုံ ပွဲတော် အတွက် မြန်မာရတနာ ဟိုတယ်(Myanmar Treasure Resorts)မှ ဓါတ်ပုံပြိုင်ပွဲ မှ ဆုရွေးချယ် ခံရသောသူများ ကို ထပ်ဆင့် ဆုချီးမြှင့် ပေးခြင်းဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းအတွက် ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါသည်။ ဆုရရှိသူမှလည်း အထူးကျေနပ်နှစ်သက်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်မိပါသည်။မြန်မာရတနာ ဟိုတယ်(Myanmar Treasure Resorts) မှ ဆုရရှိသူတဦးအတွက် နှစ်ညအိပ် နှစ်ယောက်ခန်း တခန်း (Suite Room) (မနက်စာ(breakfast)အပါအ၀င်) ကို ဆုချီးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဟိုတယ်မှာ ပုဂံမြို့ သစ် တွင်တည် ရှိပြီး စားသောက်ဆိုင် များနှင့် လည်း နီးပါသည်။
Written by Khaing Zar Win Swe on 03 May 2017 . Posted in News My.
ပုဂံဓာတ်ပုံ ပွဲတော် အတွက် ရွှေနန်းတော် ဟိုတယ်(Aureum Palace Hotels&Resorts)မှ ဓါတ်ပုံပြိုင်ပွဲ မှ ဆုရွေးချယ် ခံရသောသူများ ကို ထပ်ဆင့် ဆုချီးမြှင့် ပေးခြင်းဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းအတွက် ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါသည်။ ဆုရရှိသူမှလည်း အထူးကျေနပ်နှစ်သက်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်မိပါသည်။ရွှေနန်းတော် ဟိုတယ်(Aureum Palace Hotels&Resorts)မှ ဆုရရှိသူနှစ်ဦးအတွက် ၂ ညအိပ် နှစ်ယောက်ခန်း တခန်း (Jasmine/Orchid Garden View Villa) ၊ ၂ ညအိပ် နှစ်ယောက်ခန်း တခန်း (Jasmine/Orchid Lake View Villa) (မနက်စာ(breakfast)အပါအ၀င်) ကို ဆုချီးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဟိုတယ်မှာ ပုဂံမြို့ သစ် နှင့် ညောင်ဦးမြို့ အကြားရှိ တိတ်ဆိတ်အေးချမ်းသောနေရာတွင်တည် ရှိပြီး ဟိုတယ်အတွင်းရှိ မျှော်စင်မှလည်း ပုဂံမြို့၏ သာယာလှပသော ရှုမျှော်ခင်း ကို ကြည့်ရှုခံစားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Written by Khaing Zar Win Swe on 01 May 2017 . Posted in News My.
ပုဂံဓာတ်ပုံ ပွဲတော် အတွက် သရပါ ဟိုတယ် မှ ဓါတ်ပုံပြိုင်ပွဲ မှ ဆုရွေးချယ် ခံရသောသူများ ကို ထပ်ဆင့် ဆုချီးမြှင့် ပေးခြင်းဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းအတွက် ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါသည်။ ဆုရရှိသူမှလည်း အထူးကျေနပ်နှစ်သက်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်မိပါသည်။သရပါ ဟိုတယ်မှ ဆုရရှိသူတဦးအတွက် ၂ ညအိပ်၊နှစ်ယောက်ခန်း(Deluxe) တခန်း (မနက်စာ(breakfast)အပါအ၀င်) ကို ဆုချီးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဟိုတယ်မှာ သရပါဂိတ်နှင့် နန်းတော် အနီးတွင် ရှိ၍ ရှေးတော်ဝင် အချိန်ကို မှန်းဆ ခံစား တည်းခိုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။